आजको व्यस्त जीवन शैली घरको कामकाजमा धेरै दैनिक वस्तुहरू सुविधा। र यी को एक स्वचालित वाशिंग मिसिन छ। यसलाई आफ्नै काम बाट विचलित भइरहेको बिना अनुमति दिन्छ, निकै मार्गदर्शन लुगा धुने तुलना समय बचाउँछ जो, लुगा धुन। 10 वर्ष यस्तो उपकरण को सेवा जीवन, तर धाराको पानी को गरीब गुणवत्ता, दुर्भाग्य, यो समय कम गर्न सक्छ।
मात्रा - यो लुगा धुने मेसिन किन तल खण्डन भन्दा साधारण कारण छ। लवण (मात्रा) को भारी संग्रह को रूप मा ताप तत्व, र यो काम बस रोक्छ। कसरी लुगा धुने मेसिन सफा गर्न सिरका वा अन्य प्रभावकारी माध्यम संग, यस लेखमा वर्णन गर्न।
सामान्यतया, मान्छे सिर्फ एक पारंपरिक वाशिंग मिसिन एक कपडा संग, rubbed अन्य, सानो भागहरु ध्यान छैन। केही समय पछि, पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री को शुद्धीकरण एक बाक्लो तह गठन गर्ने अधिकतम प्रयास र समय समय, हावा कंडीशनर वा ब्लीच संग पाउडर को रहलपहल साथै पार्छन् हुनेछ भनेर भन्छन्। कसरी बाहिर बाट सिरका संग लुगा धुने मेसिन सफा गर्न?
यो मिसिन र प्रत्येक लुगा धुने पछि पाउडर लागि ट्रे हटाउन राम्रो बानी छ, तर यो गर्दैन भने, त्यसपछि यसलाई 9% सिरका पानी को सानो साथै एक पारंपरिक टूथब्रश र dishwashing तरल प्रयोग साफ गर्न सकिन्छ। पछि फोम स्पन्जले बन्द धुन 1, र ब्रश दूषित साइटहरु RUB,: हालतमा5को एक अनुपात मा पतला हुनुपर्छ। त्यसपछि सफा कपडा संग ड्राई हटाउन।
पानी गरिब वितरण, लुगा धुने मेसिन बाट अप्रिय odors, र झन् खराब - रिसाव - यी सबै संकेत फिल्टर को clogging गर्न दर्शाउन। यसलाई समाधान गर्न, तपाईं पूर्व-स्थानापन्न, लुगा धुने मेसिन तल पानी सकिन गर्न वाल्व खोल्न र नली बाट बाँकी पानी सकिन क्षमता हुनुपर्छ। थप राम्रो फिल्टर बाहिर यसको भित्र सफा गर्न र र फिर्ता सेट unscrewing।
यो लुगा धुने मेसिन बाट अप्रिय odors यो ड्रम सफाई प्रक्रिया पकड आवश्यक छ भनेर हामीलाई बताउँछ। यो लुगा धुने मेसिन ड्रम, सिरका वा अन्य साधन कसरी सफा गर्ने? यो लुगा धुने मेसिन को ड्रम मा ब्लीच कुनै पनि एक कप खन्याउन आवश्यक र केही मिनेट लागि अधिकतम तापक्रम कुनै पनि लाँड्री बिना धुने चक्र सुरु हुनेछ। यो पनि 9% सिरका को सफाई को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ग्लास एसिटिक समाधान ड्रम मा खन्याइन् र एकल धुने चल्छ छ।
आफ्नो लुगा धुने मेसिन मा limescale लड्न एक माध्यम रूपमा सिरका
हरेक महिला कम्तिमा एक पटक छक्क परे: "मात्रा सिरका देखि लुगा धुने मेसिन कसरी सफा गर्न" हामीलाई यस सफाई एजेन्ट को भिन्न को एक विचार गरौं। तरल पाउडर लागि कक्ष मोड (95 डिग्री) उबलते अधिकतम चक्र समयमा दुई कप 9% सिरका र रन खन्याउन आवश्यक छ। तपाईं मिसिन पानी छान्न र सिरका संग मिश्रण प्रतीक्षा छ। अर्को धुने चक्र रोक्न र सिरका र वाशिंग मिसिन को भित्र मा scum नष्ट गर्न सुरु जो समयमा एक घण्टा को लागि छोड्नुहोस्। एक घण्टा पछि धुने चक्र पुनर्स्थापना र यसको पूरा गर्न को लागि प्रतीक्षा।
कसरी सिरका संग लुगा धुने मेसिन सफा गर्न? यो कठिन र पहुँचयोग्य सबैलाई छैन भनेर बाहिर जान्छ। कि ड्रम हराइरहेको अंडरवियर मा सफाई समयमा यो महत्वपूर्ण छ। को Boiling मोड को अन्त पछि तपाईं मात्रा र सिरका अवशेष देखि वाशिंग मिसिन को आन्तरिक भागहरु धुन सानो धुने चक्र राख्नु आवश्यक छ। तपाईं सिरका सार प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, मात्रा ruthlessly विद्युत हीटर हटाइयो, ड्रम र ढोका छाप गम बाट पनि साफ डिटर्जेंट अवशेष, जीवाणुहरू र odors देखि वाशिंग मिसिन हटाइ। सिरका कुनै पनि chlorinated एजेन्ट द्वारा प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ, तर सिरका सार संग तुलना रूपमा, थप आक्रामक र विषाक्त छ। धेरै मानिसहरू सफा कसरी वाशिंग मिसिन सिरका 70% मा रुचि हुन सक्छ। 9% इच्छा ग्लास सिरका - यो गर्न, 25 एमएल Essences पानी 180 एमएल संग पतला।
शुद्धीकरण प्रक्रिया को पूरा भएपछि पानी संग पतला सिरका संग moistening पछि मिसिन कपडा हटाउन आवश्यक छ। विशेष ध्यान कि अवशेष पानी र नष्ट मात्रा जम्मा जहाँ किनभने जो भविष्यमा, छ र त्यहाँ एउटा अप्रिय गन्ध छ, किनभने गम सील, ड्रम भुक्तान गर्नुपर्छ। निष्कर्षमा, एक स्वच्छ, सुक्खा कपडा संग ड्राई सबै हटाइ गर्नुपर्छ।
अप्रिय odors हटाइ
सिरका र लुगा धुने मेसिन बाट एक अप्रिय बासी गंध संग copes। सार मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ छैन शुद्धीकरण लागि तर पनि scum गठन को निवारक उपचार को लागि। तपाईं लुगा धुने भान्सा तौलिया मा सिरका एक गिलास थप्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूले चोट छैन। सबै भन्दा राम्रो प्रभाव प्राप्त गर्न चाहने, केही कसरी सिरका र पाक सोडा संग लुगा धुने मेसिन सफा गर्न सोच छन्। लुगा धुने समयमा मात्रा गठन रोकन साथ यी दुई माध्यम थपियो हुन सक्छ सानो रकम मा लागि समय समयमा यो गर्न।
सफाई को यो विधि एक पटक हरेक महिना भन्दा बढी अक्सर सिफारिस गरिएको छैन। महत्वपूर्ण कुरा, मेशिन ड्राई wiping प्रत्येक प्रयोग र पछि पाउडर कक्ष र एक ढोका अवशिष्ट तरल को वाष्पीकरण गर्न अलिकति ajar छोड्नुहोस्। समय समयमा फिल्टर माटो र अन्य accumulations देखि साफ गर्नुपर्छ। सिरका संग लुगा धुने मेसिन सफा गर्न, र लाभ र यो विधि को बेफाइदा के छन् यो सम्भव छ।
सिरका सार scum सामना। र बेफाइदा
कम मूल्य, सिरका हरेक व्यक्ति खरिदका लागि उपलब्ध छ।
यो लुगा धुने मेसिन बाट अप्रिय गंध अब विचलित हुन। माथि वर्णन सिरका को गंध, लुगा धुने मेसिन कसरी सफा गर्न।
पूर्ण लुगा धुने मेसिन आन्तरिक भागहरु सफा - मिसिन।
यो विधि को बेफाइदा:
सिरका धेरै पन्जेन्ट गन्ध छ, त्यसैले यसलाई संग उपचार समयमा राम्रो कोठा जहाँ वाशिंग मिसिन ventilated गर्नुपर्छ।
सफाई पछि, तपाईं सिरका को कचौरा बाट गन्ध को हटाउनु केही अतिरिक्त rinses प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ।
साथै, तपाईँले कडाई, यस औषधिको खुराक पालना गर्नु अनिवार्य सिरका सार नकारात्मक छाप गम असर गर्ने क्षमता छ देखि, यो उनको गुण र आंसू गुमाउने, कठोर बन्न सक्छ।
कसरी वाशिंग मिसिन लेखको पहिलो भाग मा विस्तृत वर्णन गरिएको छ सफा गर्न सिरका प्रयोग गर्न। यसलाई उल्लेख र सफाई को अन्य वैकल्पिक विधि लायक छ।
साइट्रिक एसिड मुकाबला limescale एक माध्यम रूपमा
अर्को उपकरण, सबै परिचित पूर्ण एकै समयमा महंगा पाउडर र तरल गुणस्तर conceding बिना वाशिंग मिसिन मा scum सामना गर्न मद्दत गर्छ। यो एजेन्ट साइट्रिक एसिड, वा dicarboxylic एसिड छ।
यो दुई प्रकार को छ:
घरेलू। कुनै पनि भण्डारमा बेचे। यो बिल्कुल घरमा प्रयोग गर्न सुरक्षित छ।
औद्योगिक आवेदन मा जटिल तंत्र को शुद्धीकरण लागि प्रयोग विशेष।
यसलाई विशेष साइट्रिक एसिड को प्रयोग workpieces को क्षेत्र मा आधारित, सही गणना गर्नुपर्छ भनेर थाह महत्त्वपूर्ण छ। एकाग्रता 10% माथि छ भने, यो अनावश्यक मात्रा, तर पनि लागि मात्र होइन वाशिंग मिसिन को भागहरु, त्यो केवल corrode हुनेछ हानिकारक हुन सक्छ, र एकाग्रता 4% भन्दा कम छ भने, त्यसपछि उपकरण अप्रभावी हुनेछ।
साथै, कागति को रस र साइट्रिक एसिड भ्रममा छैन। कागति को रस को मात्रा विरुद्ध कुनै कार्य छ - यसको आवेदन बेकारी र अर्थहीन छ। साइट्रिक एसिड प्रयोग गर्दा स्पष्ट हुन औषधिको खुराक पालन गर्नुपर्छ, अन्यथा यो नकारात्मक वाशिंग मिसिन को रबर भागहरु गुणस्तर प्रभावित हुनेछ।
शुद्धीकरण प्रक्रिया साइट्रिक एसिड को
यो लुगा धुने मेसिन हानि कारण बिना मात्रा बारेमा भूल मदत गर्नेछ जो safest विकल्प, एक विचार गर्नुहोस्। तपाईं पहिलो सबै सनी यसलाई देखि निकाल्न आवश्यक छ। एक ड्रम संग ड्राई हटाउन। कस ढोका बन्द गर्नुहोस्। यो पाउडर खण्ड3चमचा साइट्रिक घर या carboxylic एसिड र रन मोड (95 डिग्री) उम्लिरहेको खन्याउन। कुरा सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट मोड कपास धुन हुनेछ। सबै भन्दा राम्रो परिणाम लागि, केही थप rinses स्थापना गर्न आवश्यक छ। पानी अन्तमा नाश सबै scum धुन र मिसिन को भित्र सफा। यस मामला मा, स्पिन चक्र आवश्यक छैन सेट गर्न, कार अंडरवियर छैन जस्तो छ। सफाई पछि नाली नली र सील रबर ब्यान्ड, मात्रा को remnants प्राप्त गर्न सक्छ जो जाँच गर्न भूल छैन। पत्ता लगाउने तिनीहरूलाई हटाउनुहोस् मा, सबै देखिने भागहरु सफा कपडा संग सूखी मिसिन को भित्र हटाउन। माथिको प्रक्रियाहरु सबै रबर पन्जा लगाउन सिफारिस गरिएको छ।
फलस्वरूप, शुद्धीकरण को यो विधि मात्रा को शुद्धीकरण देखि उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सकिँदैन, साथै वाशिंग मिसिन नवीनता फर्कन र परिणाम रूपमा, बिजुली को किलोवाट एक धेरै रकम बचत गर्न। तर यो प्रक्रिया गर्न आवश्यक छैन भनेर2भन्दा बढी पटक एक वर्ष थाहा महत्त्वपूर्ण छ।
Subtleties साइट्रिक एसिड को प्रयोग
साइट्रिक एसिड वाशिंग मिसिन को रबर भागहरु आदर पर्याप्त नरम गुण छ र विभिन्न औद्योगिक Oxidants संग तुलना।
अम्लीय वातावरण छाप र वाशिंग मिसिन केही अन्य भागहरु संग उपचार छ जो तेल, धुन सक्छन् किनभने टाढा त्यहाँ कुनै बिजुली हीटर सफा साइट्रिक सिफारिश गरिएको भन्दा बढी अक्सर एसिड वा carboxylic हुनुपर्छ, र यो सबै भन्दा राम्रो तरिका वाशिंग मिसिन को सञ्चालन असर छैन - मिसिन।
यो कहिले काँही तातो पानी र एसिड, तापमान सेन्सर आवारा सक्छ जब अन्तरक्रिया हुन्छ कि हुन्छ।
को सफाई प्रक्रिया चलिरहेको बेला, जो एक हार्डवेयर पसलमा खरिद गर्न सकिन्छ मात्रा, एक विशेष एजेन्ट थप्न, त्यसैले तिनीहरू पानी भएको दूर मात्रा को रहलपहल ल्याउन मदत साइट्रिक एसिड आवश्यक छ संगै।
क्लोरीन र साइट्रिक एसिड को संयोजन पनि scum हीटर निर्मूल गर्न मद्दत गर्छ। यो माथि वर्णन सबै manipulations बराबर भागहरु (उदाहरण, 1 ग्लास) मा यी दुई घटक संयोजन र गर्न छ। पछि यो लुगा धुने मेसिन सफाई चमक र क्लोरीन कि मिसिन, अप्रिय odors को जो कारण थप को रिमोट भागमा बसोबास जीवाणुहरु को छुटकारा मदत गर्नेछ प्राप्त। तर यो विधि दुरुपयोग गर्न पनि छैन यो लायक छ, एकचोटि हरेक3महिना पर्याप्त, क्लोरीन एक वाशिंग मिसिन मा रहेको रबर को घटक मा एक प्रतिकूल प्रभाव छ किनभने हुनेछ।
सोडा को माध्यम द्वारा एक मोल्ड संग संघर्ष
बाहिर पनि मोल्ड को कुनै स्पष्ट संकेत भने भन्न जो थियो छैन यो आवश्यक छ मोल्ड, को छुटकारा प्राप्त गर्न प्रक्रिया पूरा। यस मामला मा, निवारक उपाय बारे मा भूल छैन। तपाईं विचलित हुनेछैन 1 र मोल्ड: यो गर्न, 1 को एक अनुपात मा, बेकिंग सोडा र पानीको समाधान मा डूबा एक नम कपडा संग वाशिंग मिसिन को आन्तरिक भागहरु र रबर घटक हटाउन। प्रक्रिया एक साप्ताहिक आधार मा दोहोर्याइएको छ।
कसरी सिरका र साइट्रिक एसिड संग लुगा धुने मेसिन सफा गर्न, यो पहिले नै ज्ञात छ। अब यसलाई राम्ररी क्लोरीन ब्लीच लागू गर्न कसरी बुझ्न आवश्यक छ? क्लोरीन ब्लीच प्रयोग पनि चाँडै scum हटाउनेछ प्राप्त गर्न सक्छन्। को उपयुक्त ज्ञात हालतमा "सफेदी" को लागि आदर्श। तपाईं लुगा धुने पाउडर को एक नाप्ने कप आवश्यक हुनेछ। यसलाई पूर्ण कप तिनीहरूलाई मापन र लुगा धुने मेसिन ड्रम मा खन्याउन आवश्यक छ। लामो लुगा धुने चक्र स्थापना, तापमान छैन 60 भन्दा कम डिग्री छ। पूरा भएपछि राम्रो कुल्ला र सफा कपडा संग ड्राई हटाउन। यो विधि गर्दा वाशिंग मिसिन को आन्तरिक तत्व गर्न मात्रा र अन्य अशुद्धियों सामना माथि वर्णन ती भन्दा कम प्रभावकारी छैन। यो विधि को मुख्य drawback को सफाई प्रक्रिया बेला एक अप्रिय गन्ध उल्लेख गर्न सकिन्छ। यो गन्ध चाँडै गायब गर्न ढोका र Windows खोल्न आवश्यक छ। यो स्वास्थ्य सामान्य राज्य मा नकारात्मक प्रभाव छ रूपमा क्लोरीन को श्वास vapors, छैन सिफारिस गरिएको छ। यो विधि कुनै3भन्दा बढी पटक एक महिना प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मात्रा सिरका र अन्य साधन देखि लुगा धुने मेसिन सफा गर्न कसरी यस्तो विस्तृत विवरण पढेपछि तपाईं अब उत्पन्न गर्नुपर्छ यस विषयमा कुनै प्रश्न छ।
Aypada लागि मामला - यो किन आवश्यक छ?
जुत्ता पोलिस "Salamander": संरचना, प्रकार, समीक्षा
को घाँटी मा एक गांठ को एक भावना कस्तो कारण हुन सक्छन्?
Andrey Bely - रूसी कवि, लेखक र समालोचक। Andrei Bely को जीवनी, रचनात्मकता
कसरी विवाह मा सुरक्षित गर्न: वास्तविक सुझावहरू
मास्को मा मुख्य मस्जिद के हो? अन्य मुसलमान संगठन को स्थान
Vatutin Andrey: लिजेन्ड बास्केटबल को जीवनी
थर्मल नेटवर्क: निर्माण, मर्मत र सञ्चालन नियम
कक्षाकोठामा शिक्षक को शैक्षिक काम योजना। कक्षाकोठामा शैक्षिक काम योजना
Fireproof कवर। काठ संरचना को आगो retardant कोटिंग
एक अचम्मको नम्बर: मशरूम rogatiki